NIN SIGTAY MA NOOLA (Sheeko gaaban) « AYAAMO TV
NIN SIGTAY MA NOOLA (Sheeko gaaban) by Maamule sare 1 of 1
948 Views Date January 26th, 2014 time 9:55 am
Toban iyo kow sano ayaan dhiganayay dugsi. Dhawr bil kaddib waxaan u gudbayaa fasalka ugu danbeeya dugsiga sare. Hadda waxaa la joogaa xilligii uu dugsiga fasaxa ahaa. Waa xilli xagaa ah. Maalinta inteeda badan roob baa da’a. Godadka laamiyada biyo wasaq ah ayaa ceegaaga.
Magaalada Muqdisho oon ku dhashay kuna soo barbaaray waxaa ka socda iminka dagaal qaraar oo faraha looga gubtay.
Inkasta oo goobaha dagaalka ka socda xaafaddeenna ka fogtahay, haddana si toos ah iyo si dadban ayuu dagaalka naftayda u saameeyay. Niyad-jab ayuu igu riday. Maalin kasto gurigeenna xabbado habow ah ayaa dul mara, mar kalana kusoo dhaca.
Saakay walaalkey iga yar ayaa dukaan laamiga inoo dhow ku yaal ka doonay saliid-macsaro aan canjeerada ku goosaaranno. Waa aroor hore. Xabbado fara badan ayaa kusoo dhacaya mininkeenna iyo guryaha inoo dhow. Laamiga ayay ugu sii darantahay; waayo wuxuu toos ugu beeganyahay meesha ay labada ciidan ee dagaalku dhex marayo joogaan.
Faarax isagoo baqaya ayuu baxay, Ilaahey ammarkiis isagoo nabad qaba oo saliiddii sida ayuu soo laabtay. Illinka markuu kasoo galay ayuu saliiddii si tartiib ah u dul saaray Miis, isagiina qolkii aan ku jiray ayuu soo galay isagoo ashahaadanaya Lugihiisuna ay celin la’yihiin. Aad buu u walwalsanaa; wejigiisa walaac, cabsi iyo naxdin weyn ayaa ka muuqatay.
Maxaa ku helay markii aan weydiiyay ciyow wuu hadli kari waayay. Cabbaar ayuu iga aamusnaa isagoo indhaha taagaya. “laamiga waxaan kusoo arkay nin meyd ah! Oo markaas ay xabbad wiifto ah ku dhacday! Madaxa ayay kaga dhacday. Dad badan ayaa ku dol xoonsanaa. Cid garatay cidduu yahay ma jirin” ayuu ugu danbeys haleelay inuu dhaho Faarax.
Faarax aad buu u walaacay una sasay! Wuxuu yiri lallabo ayaan dareemayaa mana quraacan karo.
Nolosha aan ku noolahay iyadoo in badan macquul ah haddana waan saluugsanahay. Waxaan u arkayaa in ay dallagantahay oo ay wax ka dhimmanyihiin.
Gurigeenna dhagax buu ka samaysanyahay (sar), koronto habeenkii uun la helo ayaan isticmaalnaa, telefishin aan daawanno waan heysannaa, lacagta iskuulka si dhib yari leh ayuu waalidkeen u bixin karaa. Nolosha noocaas ah waa tan dadku u badanyihiin oo dhexdhexaadka ah.
Laakiin aniga heerka nololeed ee qooskeyga waan qawadsanahay. Had iyo jeer waxaan ka fakaraa tab iyo xeeshii aan ku hormarin lahaa iyo sidii aan u sare marin lahaa nolosha reerkeyga. Habka ugu fudud ee mar kasta igu soo dhaca waa anigoo dugsiga sare dhammeeya, jaamacad gala, dabadeed shaqa hela. Habkaas inkasta oo la hubo haddana waa ila dheeryahay. Haddii aan ganacsi geli lahaa oon raasumaal raadsado, waxay noqoneysaa in aan waxbarashada ka tago. Taana suurtogal ma aha oo waalidkey, gaar ahaan aabbahay waxabarashada ayuu aaminsanyahay. Qof aan wax baran wuxuu u heystaa qof qasaaray oon macne iyo milgo midna lahayn.
Habeen kasto kolka aan sariirta tago oon hurdo damco arrinkan aad baan uga fakaraa. Aad baan uga murgaa. Saacad iyo dheeraad bay igu qaadataa inaan hurdo.
Habeen habeennada ka mid ah ayaa waxaa igu soo dhacay fakar ah in aan TAHRIIBO! Baryahan waxaa aad u badan dhallinyarada wiilal iyo gabdho leh ee Yurub u tahriibta. Waxaan is dhahay bal adna nasiibkaaga tijaabi, waa intaas ood Yurub tagtaa dabadeed riyadaadii ay kuu rumowdaaye.
Wiil aan saaxiib nahay oo Cali la yiraahdo ayaan fakarkii tahriibka u sheegay, kana raariday inaan isku lug-darsanno oon jar-iska-xoorka wada tijaabinno. Wuu ku qancay. Lacag aan badnayn oon horay u haystay ayaan ku biiriyay tu aan amaahday. Habeenkaas laba cisho kaddib, goor barqo ah gaari baan Gaalkacyo usii saarnaa…..LA SOCO QAYBTA 2-AAD
W/Qoray: Shaakir Maxamed Cabdullaahi